बेहुलीले बेहुलालाई मण्डपमा छोडेर अन्तरवार्ता दिन गएपछि……. « Pariwartan Khabar
बेहुलीले बेहुलालाई मण्डपमा छोडेर अन्तरवार्ता दिन गएपछि…….
12 December, 2020 4:51 pm
एजेन्सी । भनिन्छ नि आफ्नो सपना पुरा गर्नु सवैलाई रहर हुन्छ, अनि आफ्नो लक्ष्य हाँसिल गर्नलाई आतुर ! सरकारी शिक्षकका लागि निवेदन खुलेको थियो । उनले त्यसका लागि निवेदन दिएकी थिइन् । तर उनको अन्तर्वार्ता र अन्य प्रकृयाको काम संयोगले विवाहकै दिन तय भयो ।
भारत रामनगरमा गोंडाको बाराबंकी निवासी प्रज्ञा तिवारीले हातमा मेहंदी लगाएकी थिइन् । उनको कपाल पनि वेहुली झै सजिएको थियो । तर उनी जागिरको लागि फारामको तयारी गरिरहेकी थिइन् ।